Victoria House Resort & Spa, Belize dia manomboka ny fialamboly sy ny fitoniana vaovao amin'ny Masoandro
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny Hotely sy Resort » Victoria House Resort & Spa, Belize dia manomboka ny fialamboly sy ny fitoniana vaovao amin'ny Masoandro
Vaovao Mafana Belize • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao lafo vidy • Vaovao • Resorts • Tourism • Fifanarahana Travel | Torohevitra momba ny dia • Fanavaozana ny tanjon'ny dia
Fijerena dobo an'ny Victoria House Resort & Spa, Belize
Ny fananan'ny nosy Victoria House Resort & Spa izay nahazo loka tamin'ny morontsirak'i Belize dia manolotra karazam-pitaovana lafo vidy ho an'ny fialantsasatra tsy hay hadinoina ho an'ny vahiny.
Nanambara tolotra vahiny vaovao roa ny fialan-tsasatra - ny Petite Escape sy ny Blissely Belize Packages mba hanomezana aingam-panahy ny fialan-tsasatra farany na fikatsahana fahafinaretana.
Victoria House dia tontolo milamina izay ahafahan'ny vahiny mankafy fitsaharana tanteraka ary koa fanaovana traikefa nahafinaritra.
Fonenana manankarena, kojakoja an'izao tontolo izao ary serivisy mahafinaritra no ho hitan'ny vahiny amin'ny fialan-tsasatra tonga lafatra ataon'izy ireo.
Victoria House Resort & Spa, Belize, fananana akaiky sy mirentirenty ao amin'ny nosy Ambergris Caye Belize, dia faly manolotra fanomezana vahiny vaovao roa - ny Petite Escape sy ny Blissely Belize Packages mba hanomezana aingam-panahy ny fialan-tsasatra farany na fikatsahana fahafinaretana. Ny vahiny amin'ny fananana amoron-dranomasina dia afaka mankafy fitsangatsanganana 3-ka-7-alina karakaraina mba hanomezana fitiavana, fialam-boly, fialamboly ary fialamboly. Miaraka amin'ny trano manara-penitra, kojakoja an'izao tontolo izao ary serivisy mahafinaritra, Victoria House Resort & Spa dia toerana mety indrindra hifandraisana amin'ny olon-tianao ary hanao fahatsiarovana.
"Ny tranon'ny Victoria dia tontolo milamina izay ahafahan'ny vahiny mankafy fitsaharana tanteraka ary koa hetsika mahafinaritra", hoy i Janet Woollam, tale jeneralin'ny Victoria House Resort & Spa. "Miaraka amin'ny Petite Escape Package na ny Blissfully Belize Package, ny vahiny dia manana safidy maro ary afaka manararaotra ireo zava-bita mampiavaka ny toeram-pialan-tsasatra ary manana ihany koa ny fotoana hijerena ilay nosy tsara tarehy sy hiaina ny kolontsaina tsy manam-paharoa amin'ny hafainganam-pandehan'izy ireo amin'ny golf tenany ihany. sarety. ”
The Petite Escape Petite dia ahitana:
• Fonenana tsara na efitrano Casita na Palmetto
• sakafo maraina feno isan'andro
• Tavoahangy Prosecco iray amin'ny fahatongavany sy ny cocktail "Belizean Colada" tongasoa
• Indray andro ny fanofana sarety golf (ao anatin'izany ny lasantsy sy fiantohana)
The Fonosana Belize am-pifaliana dia ahitana:
• Famerenana fametahana sonia sonia mandritra ny adiny iray ho an'ny roa ao amin'ny spa (mitentina $ 220)
• Vola $ 150 hampiasana fivarotana antsitrika eny an-toerana
• Tavoahangy Prosecco sy cocktail "Belizean Colada" tongasoa
• Indray andro ny fanofana sarety golf misy gazy
• Fampiasana bisikileta, kayak, tabilao fametahana miambina ary fitaovana snorkel tsy misy fetra
Victoria House Resort & Spa dia fantatra amin'ny "volony nosy" miala sasatra ary ny hakanton'ny kiraro manerana ny toerana fialamboly. Ahitana trano honenana isan-karazany toy ny Casitas tropikaly quintessential, villa mitokana misy dobo manokana, villa fahitana ranomasina, na efitrano voaravaka kanto ao amin'ny tranobe manana endrika roa. Victoria House Resort & Spa dia faly ihany koa manasongadina a spa fanompoana feno trano fanatanjahan-tena ary koa toeram-pisakafoanana mahandro telo samy hafa isaky ny tranga.
Miorina eo an-tsisin'ny iray amin'ireo zava-mahatalanjona voajanahary mahavariana indrindra eto an-tany, ny Belize Barrier Reef, Victoria House dia manolotra karazana traikefa nahafinaritra. Afaka miala sasatra amin'ny fitsidihan'ny dobo eo an-toerana sy ny morontsiraka tsy miankina ny vahiny, na mandray anjara amin'ny hetsika mampientanentana toy ny bisikileta, kayak na sambo mitaingina. Ireo ekipa efa za-draharaha sy efa tranainy ao amin'ny tranon'ny Victoria House sy Fantraea Dive Shop manana mari-pankasitrahana PADI izay miorina eo amin'ny fiantsonan'ny trano, dia afaka mandamina hetsika maro ho an'ny vahiny toy ny antsitrika, snorkeling, jono ary cave. Fantasea Dive Shop dia manolotra fanofana an-trano sy fanamarinana ihany koa.
Azo idirana mora foana ilay nosy amin'ny alàlan'ny sidina mpandeha 15 minitra avy any Belize tanàna, 35 kilaometatra fotsiny ny lavitra. Ny fikarohana ny tempolin'i Maya teo akaiky teo, ny fizarana zipo amin'ny canopies an'ny ala mikitroka miaraka amin'i Black Howler Monkeys, mandray anjara amin'ny dian'ny ala tropikaly, na fitsangatsanganana any amin'ny haran-dranomasina manerantany dia azo atao ao Ambergris Caye ary azo ampifandraisina amin'ny ekipa mpiambina ny resort. Ireo fonosana roa ireo dia misy ankehitriny hatramin'ny 20 desambra 2021. Ny antsipiriany misimisy sy ny fomba famandrihana Hita eto.
Ho fanampin'izany, ho an'ny fahasalamana sy fahasalamana ho an'ny vahinin'ilay toeram-pialantsasatra, ny mpiasa rehetra dia nampiofanina tanteraka amin'ny maha-zava-dehibe ny fitazonana ny ambaratonga avo indrindra amin'ny fidiovana sy ny fiarovana fiarovana ary eo am-panaovana traikefa ananan'ny vahiny sy matihanina. Nametraka tobim-panadiovan-tànana manerana ny trano ny toeram-pialan-tsasatra, nanangana Unite desinfectant UVC Handheld ho an'ny fanadiovana ny efitrano fandraisam-bahiny, toerana malalaka ho an'ny besinimaro, ary faritra fisakafoanana sy zava-pisotro, ary mampiasa vokatra fanadiovana voaporofo azo antoka, toy ny Aqueous Ozone ho an'ny fanadiovana rano sy A / B Cold. Fogging amin'ny fanamorana ny faritra lehibe.
Any amin'ny Belize any Ambergris Caye, no lehibe indrindra amin'ny nosy Belizean amoron-tsiraka, Victoria House dia roa kilaometatra atsimon'ny tanàna San Pedro tsara tarehy. Ny Resort dia manome tsiro ny hakanton'ny kapa tsy mitafy kiraro izay mitazona ny mpitsidika hiverina bebe kokoa, miaraka amin'ny efitrano fandraisam-bahiny 42 manomboka amin'ny casit an-tampon-trano ka hatrany amin'ny villa amoron-dranomasina misy dobo manokana, efitrano fambolena ary villa fahitana ranomasina. Ny Palmilla Restaurant sy ny amiraly Nelson's Bar dia malaza amin'ny sakafo sy zava-pisotro tsara ateraky ny serivisy manokana sy manokana. Ny fiheverana ny antsipirian'ny mpiasa sy ny mpitantana dia nahazo loka avy amin'ny haino aman-jery iraisam-pirenena sy loka avy amin'ireo fikambanana malaza toa an'i Conde Nast Traveler, Conde Nast Johansens. Raha mila fanazavana fanampiny, azafady visit here.